कलेज ड्रेसमै यो जोडिको यस्तो हर्कत (भिडियोसहित) -
कलेज ड्रेसमै यो जोडिको यस्तो हर्कत (भिडियोसहित)
२०७८ असार ६ गते प्रकाशित २०७८ असार ६ गते प्रकाशितetoday
केही घ’टनाले भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने युक्तिलाई केबल उखान मात्रमा सिमित गरिदिन्छ । र पत्याउनै नसकिने घ’टना हुन्छन् । कैलालीका एक किशोरको
बयानले सबैलाई अचम्बित पारेको छ । उनको बयानले माथी उद्धारण गरिएका शब्दलाई मिथ्या सावित गरेको छ ।आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजु देवरबाट ग’र्भवती भइन् । त्योपनि दाजु विदेश गएका बेला । घ’टनाले त्यति बेला पुष्टि पायो जतिबेला भाउजुको पेटमा हुर्किदै गएको बच्चा बढेर पेटको
आकारमा बृद्धि भयो । प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई ग’र्भवती बनाएका हुन्। मेरो टिन एज लभ परिवार, साथीभाइ र समाजलाई राम्रोसँग बुझाउन
सके कि”शो’रावस्थामा विपरित लिं”गीबीच हुने स”म्ब’न्धलाई उनीहरूले सामान्य रुपमा लिने थिए। जसले गर्दा स्वस्थ्य सम्वन्ध विकास हुने थियो। लुकिछिपि भेटनु पर्ने र अपराध गरेको जस्तो व्यबहार सहनु पर्ने थिएन।
कि”शो’रावस्थाको माया व्यक्तित्व विकासको आयाम हो। एक दशकअघि कि”शो’रावस्थामा सानुले पहिलो प्रेमको अनुभूति संगाल्दा समाजबाट गल्ती काम गरेको जस्तो व्यावहार भोग्नु परेको थियो। सुन्दरलाई जीवनभर माया, सद्भाव र सम्मान गर्ने प्रेमीका रुपमा पाएकामा गर्ब गर्छिन्। दुवैले स”म्ब’न्धमा अध्यात्मको संगम गराएका छन्।
त्यहाँ शा’रि’री’क र भौतिक स”म्ब’न्धको कुनै गुन्जायस छैन। एक दशकको अन्तरालपछि उनले आफ्नो पहिलो प्रेमलाई भेटिन्। र, झलझली पुराना दिन सम्झन थालिन्। सानु त्यो समाजमा हुर्किन्
जहाँ किशोरहरू अपरिपक्क हुने भएकाले अभिभावकले उनीहरूको बानी, व्यबहार र जीवनका बारेमा मार्गदशर्कको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसैले त्यो समाज कि”शो’राबस्थाको प्रेम मन पराउँदैनथ्यो।
उनी पहिलो प्रेमलाई सम्झेर आफैंसँग प्रश्न गर्छिन् ‘के त्यो माया थियो कि, आकर्षण मात्र ? अहिले सम्झेर ल्याउँदा त्यो आकर्षण मात्र थिएन किनकि, त्यसपछि उनले कहिल्यै सुन्दर जस्तो मान्छे भेटिनन्। सुन्दरसँगको जस्तो माया, सदभाव र सम्मानको भावना अरूमा आएन। अहँ कहिल्यै आएन।
कि”शो’रावस्थाको माया कच्चा र क्षणिक हुन्छ। त्यो आकर्षण मात्र हो भन्ने उनलाई विश्वास लाग्दैन। परिवार, साथीभाइ र समाजले यस्ता सम्वन्धलाई राम्ररी बुझ्ने र बुझाउने हो भने कि”शो’रावस्थामा विपरित लिं”गीबीच हुने स”म्ब’न्धलाई सामान्य रुपमा लिने थिए।
यस उमेरमा स्वाभाविक रुपमा उनीहरू नयाँ कुराको अनुभव लिन मन पराउँछन। त्यस्तै उनीहरू शा’री’रि’क आत्मीयता र यौ”न अनुभव अन्वेषण गरिरहेका हुन्छन्। यो उमेरमा उनीहरूसँग यौ”नका विषयमा
कुरा गरेर यौ”न शिक्षालाई जीवनको एक स्वास्थ्य अं’ग’का रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने कि”शो’रावस्थाका छोराछोरी यौ”नका विषयमा आफ्ना जिज्ञासा अभिभावक वा शिक्षकसँग निर्धक्क राख्न सक्छन्।
यसबाट उनीहरू उमेरसँगै आउने संवेगलाई बुझ्थे अनि स्वस्थ्य र सुरक्षित सम्वन्धको विकास गर्ने थिए। त्यसैले अभिभावक र शीक्षकमा उनीहरूलाई यो एक महत्वपूर्ण विकासको चरणका रुपमा बुझाउन महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ। आज प्रेममा असफल भएको भन्दै कति कुलतमा फसेको, मानसिक रोगी भएको र कतिले त हत्या वा आत्महत्या नै गरेका घटना भैरहेका छन्।
कि”शो’रावस्थामा खुसी र स्वस्थ राख्न पारिवारिक वातावरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेरै’छ। जस्तै स्पस्ट नियम, स्वस्थ पारिवारिक जीवनशैली, आपसी आत्मीयता आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई नयाँ कुरा गर्न उत्प्रेरणा दिने, उनीहरूका
सबल पक्षको तारिफ गर्दै राम्रो काम गर्न केन्द्रीत गर्ने। खुसी र राम्रोको अर्थ उस्तै जस्तो लागे पनि यसको फरक अर्थ हुन्छ। कि”शो’रावस्थामा भएका छोराछोरी खुसी र राम्रो दुवै हुन आवश्यक छ। यसो हुन सके स्वस्थ सम्वन्ध विकास हुन सक्छ। अभिभावक र छोराछोरी बीचमा दूरि हुँदैन थियो।
विशेषतः किशोरकिशोरीले लुकिछिपि भेट्नुपर्ने र अपराध गरेको जस्तो व्यबहार सहनु पर्ने थिएन। चोखो प्रेम गर्नेहरूले अपराध गरेझैं आत्माग्लानी गर्नुपर्ने थिएन। कि”शो’रावस्थामा भएको रमाईलो सम्वन्धले
आफैंलाई बुझ्न र पहिचान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कि”शो’रावस्थाको माया व्यक्तित्व विकासको आयाम हो। एक दशक अघि कि”शो’रावस्थामा सानुले पहिलो प्रेमको अनुभूति सँगाल्दा समाजबाट गल्ती काम गरेको जस्तो व्यबहार भोग्नु परेको थियो।
लामो समयपछि त्यही प्रेमी भेटेपछि उनले त्यो प्रेमलाई मनोभावमा बास दिइन्। भोलिपल्ट बिहानै उठेर सुनौला हिमालमाथि नाँचिरहेका सुकिला बादलहरूलाई झ्यालबाटै नियालिन्। उनले न्यानो स्पर्श पाएको महशुस गरिन्।
र, त्यो दिनलाई अविस्मरणीय बनाउने प्रयास गरिन्। प्रियतमको आगमनले सान्त्वना पाएको आभास भयो। मनैमनमा साथ, सहयोग र उत्प्रेरणा पाएको अनुभूति गरिन्। अनि हरेक पटकको वार्तालापमा आफू ऊर्जावान भएको अनुभव गर्न थालिन्। किशोरवास्था फर्केझैं लाग्यो।
ती दिन सम्झँदा उनलाई सपना जस्तै लाग्छ। कोहिनुर हिरा भन्दा बहुमूल्य क्षण जस्तो। सानु र सुन्दरलाई संयोगले नजिक्याएको थियो। उनीहरूको सम्वन्ध आज पनि उत्तिकै प्रेमिल छ। कहिलेकाहीँ साथीकोमा जाने भनेर सँगै सिनेमा हेर्न गएका पल र फर्कंदा बाटोभरि गरेका वार्तालाप, अहो कति निश्चल माया थियो!
एक दिन नदेख्दा एकले अर्कोलाई खोजिरहन्थे। आज पनि उनी सुन्दरलाई ती ठाउँहरूमा खोजिरहन्छिन्। तर सम्झना मात्र बाँकी छन्। सम्झना पनि कति मिठो! सुन्दरलाई पनि याद त आउँदो हो? उसको मायाले सानुको कि”शो’रावस्थालाई संयमित बनायो। माया दिन र लिन सिकायो अनि मायामा निवार्थ भावना हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरायो।
त्यसैले माया प्राप्ती मात्र होइन, त्याग पनि हो भन्ने सकारात्मक सोच विकास गरायो। सुन्दरको बौद्धिकस्तर सानुको भन्दा अलिक माथि थियो। त्यसैले ऊ सानुलाई सम्झाउने र पढ्न सिकाउने गथ्र्यो। त्यही व्यवहारले ऊ सधैं सानुको प्रेरणास्रोत बनिरह्यो।
उनीहरूबीच लामो समयपछि फेरि वार्तालाप सुरु भएको छ। वार्तालाप बिस्तारै बाक्लिँदै जान्छ। अतितमा सँगै बिताएका रमाइला र मिठा पल कथाका पानाझै स्वतः पल्टन थाल्छन्। सानुका आँखामा
सँगै बिताएका रमाइला दिनहरू अनि आपसमा साटेका मायाका भावनाहरू छाल बनेर लहराइरहन्छन्। त्यो उमेर अनि आकर्षण! सुन्दरको अँगालोमा बाँधिदाको मुटुको धड्कन! अहो सम्झँदै धड्कन बढ्छ।
उनी कि”शो’रावस्थामा आएका शा’री’रि’क, मानसिक र भावनात्मक परिवर्तनलाई फेरि एक पटक फर्केर हेर्छिन्। शरीर नै सिरिङ भई काँडा उम्रेका ती पल आँखैमा कैद गर्छिन्। ती दृश्यलाई न छेक्न सक्छिन् न रोक्न। केवल छालहरूमा जेलिरहन्छिन्।
सुन्दरले छोएका हातका औंलाहरू अनि सुम्सुमाएका गाला! आज पनि कुरा गर्दा रातै हुन्छन् उनका गाला र आँखा। लाजले भुतुक्क भई जुधाएर हेर्ने सक्दैनन्। कि”शो’रावस्थालाई सकारात्मक, सबल र स्वस्थ्य रुपमा आत्मसात् गर्दै एकले अर्कालाई सम्मानजनक व्यबहार गरेका थिए उनीहरूले।
स्पर्शभन्दा अगाडि नबढेको सम्वन्ध अनि ती अनुशासनमय व्यबहारले सानुको मायालाई सधैं जीवन्त र चोखै राख्यो। कि”शो’रावस्थामा आउने संवेगहरूलाई दुवैले सकारात्मक रुपमा
लिए, भावनालाई बग्न दिए। एकआपसमा व्यक्त गरे। स्वस्थ्य सम्वन्धलाई बचाएर प्रेमलाई ऊर्जामा परिणत गरिदिए। सानु आज पनि सुन्दरलाई उत्तिकै माया, सम्मान र सदभाव गर्छिन्। त्यस्तै व्यबहार सुन्दरवाट पनि पाएको अनुभूति गर्छिन्।
उनीहरू आफ्नो स”म्ब’न्धमा गर्ब गर्छन्। उनीहरू दुवैको आ-आफ्नै सुन्दर संसार छ। उनीहरू आफ्नो मर्यादालाई उत्तिकै सम्मान गर्छन्। आपसमा सहयोगीका रुपमा छलङ्ग गर्छन्। लामो समयपछि स”म्ब’न्धले नयाँ मोड लिएको छ। यसमा दुवै खुसी छन्। हिजो कि”शो’रावस्थामा उनीहरू शा’री’रि’क
स्पर्शसम्म पुगेका थिए, आज भने स्पर्शरहित प्रेम गर्दैछन्। गरिरहनेछन्। केही दिन कुरा गर्न नपाउँदा सानु नियास्रो मान्छिन्। सुन्दरको मिठो बोली अनि भावपूर्ण प्रस्तुत हुने शैलीले सानुको आत्मबल बढाएको छ। सुन्दरका कुरा सुन्न पाउँदा सानु दंग पर्छिन्।
उनी यो स”म्ब’न्धलाई जिवन्त राखेकि छिन् किनकि, यो स”म्ब’न्ध निस्वार्थ र ओभानो छ। एक्लो महशुस गरिरहेको सानुको मन र सेवाग्राहीहरुको माग र गुनासो सुन्दासुन्दा तनाव भएको क्षणबाट एकै छिन भए पनि उनी प्रफुल्ल हुन्छिन् जब सुन्दरसँग वार्तालाप हुन्छ।
एक दशकदेखि छुटेको सम्वन्ध जोड्न एक मिनेट पनि लागेन। उनीहरू बीचको त्यो निस्वार्थ माया, दरिलो सम्वन्ध र अटल विस्वास जिवितै थियो। उनीहरू वीच पाउने र गुमाउने भन्ने कुनै भाव नै थिएन।
त्यसैले त त्यो सम्वन्धले अर्को रुप लिँदा पनि दुवैलाई कुनै असर गरेको छैन। त्यो मायाले आज सानुलाई कि”शो’रावस्थामा हुने सम्वन्धको गहिराईसम्म गएर बुझ्न सहज बनाएको छ। ती विगतका दिन सम्झँदा खुसी र आनन्दको अनुभूति गर्छिन्।
सुन्दरलाई जीवन साथीका रुपमा नपाउँदा लागेको दुःख भन्दा उसलाई जीवनभर माया, सद्भाव र सम्मान गर्ने असल साथीका रुपमा पाएकामा ग”र्व गर्छिन्। दुवैले स”म्ब’न्धमा अध्यात्मको संगम गराएका छन्। त्यहाँ शा’री’रि’क र भौतिक स”म्ब’न्धको गुन्जायस छैन। असल साथीको स”म्ब’न्ध छ। यसैगरी उनीहरू खुसी भइरहुन्। धेरैधेरै शुभकामना !
पैसा गन्दा झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन यस्ता गल्तिहरु !
श्री सिद्धबाबा मन्दिरलाई ॐ लेखी भेटी स्वरुप एक सेयर गर्दै दर्शन गरी, आज सोमबारकाे राशिफल पढ्नुहोस मनोकामना पूरा हुनेछ।